तौल घटाउने चक्करमा कुनै गल्ती त भइरहेको छैन ? -
तौल घटाउने चक्करमा कुनै गल्ती त भइरहेको छैन ?
VoiceNp	प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष २८, २०७७ समय: १९:३३:०४
अहिले मोटोपन हरेकको समस्या बन्दै गएको छ । यसले शरीर भद्दा हुने मात्र होइन, रोगहरुलाई पनि जन्म दिन्छ । त्यही कारण मोटोपन नियन्त्रण गर्नैपर्ने चुनौती सबैलाई छ ।
क्यालोरीमा तीव्ररुपले गरिएको कटौतिका कारण बोसो चाँडै घट्छ तर साथै यसले मांशपेशीहरुमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । धेरै ब्रत बस्दा मांसपेशीहरु नष्ट हुन्छन् । कहिले पनि १२ सय भन्दा कम क्यालोरीयुक्त आहारा सेवन गर्नु हुँदैन । यसले टाइप–२ डाइबिटिजको शिकार बन्न बन्ने खतरा रहन्छ । यसका अलावा गलत तरीकाबाट तौल घटाउँदा थकान, कपाल झर्ने, तथा डिप्रेसन जस्ता समस्याहरु पनि उत्पन्न हुन सक्छन् ।
तौल कम गर्नका लागि स्वस्थ हुनु पहिलो शर्त हो । यसका लागि भरपेट सन्तुलित आहारा लिनुपर्छ । बजारको बोसोयुक्त र तेलयुक्त भोजन नगरौ । फाइबरयुक्त आहाराका साथै मौसमी फलहरुको सेवन गरौं । डाइट चार्ट तयार गरौं र त्यसलाई अनुसरण पनि गरौ । भोजनमा हरियो तरकारी, फल, गेडागुडी, नन फ्याटी डेरी प्रोडक्ट, सी फुड र सन्तुलित रुपमा मासुको सेवनले तौललाई नियन्त्रणमा राख्नेछ ।